५० प्रतिशत भाग माग्ने माओवादीलाई एमालेको कडा जवाफ, औकात नभुल्न चेतावनी – गोर्खा संसार
५० प्रतिशत भाग माग्ने माओवादीलाई एमालेको कडा जवाफ, औकात नभुल्न चेतावनी
गोर्खा संसार २०७५, ४ बैशाख मंगलवार १३:३७
नेकपा एमालेले ५० प्रतिशतको बराबरीमा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुननसक्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वास पात्र सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ५०-५०को गणितमा एकता नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।
मंगलबार आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा पार्टी एकतामा लागि माओवादीले ५०-५० बराबरी हैसियतको अडान राखेको छ, ओलीको बटमलाइन के हो भनी सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले चुनावमा ६०-४० मा तालमेल भएको र परिणाम ७०-३० को आएकाले अब त्यही अनुपातमा एकताको गणितीय भागवण्डा हुने स्पष्ट पारे।
‘हिजो ६०-४० गरेर मिल्यौं । अब फेरि अंक थप्दै जाने कुराले एकतालाई फाइदा गर्दैन । दाबी गरिरहँदा दाबी गर्ने पक्षले जनताले के भन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । जनमतलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । महाधिवेशनमा के होला, भोलि के होला भनेर एकतामा शर्त थप्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, पार्टी एकीकरणमा सूत्र वा संख्या होइन, अन्य धेरै आधारहरु छन् । अहिले संख्यामा अत्तो थापेर आशंका बढाउनुको अर्थ छैन ।’
तर, एमालेले दम्भ देखायो भन्ने माओवादी पक्षको आरोप छ नी भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले एमालेको स्पष्ट बटमलाइन सुनाउँदै भने, ‘गणितहरु तलमाथि भइरहन्छन् । राजनीतिले गणितहरुमा फेरबदल ल्याउँछ । कोबाट प्राप्त भएको मत हो, त्यो बुझ्नुपर्छ । टोपीको घेरो फाटेका मान्छेहरु, तीन ठाउँमा टालेको चोलो लगाएका मान्छेको मत प्राप्त गरेर देश बदल्ने संकल्प गर्ने नेतृत्वले आफू बदलिन नचाहने कुरा त ठीक भएन । यसमा उहाँहरु (माओवादी) ले सोच्नुपर्छ । मैले कोहीँ कसैलाई अपमानित गर्न खोजेको होइन, अगाडि प्रष्ट पार्न चाहन्छु । गोरखामा ५०-५० गरेर नेतृत्वको दाबी कसले गर्ने ? आजको मितिमा रोल्पामा फस्टमेनको नेतृत्व कसले गर्ने ? सूत्रहरुमात्रै खेती गर्ने अर्को पाइथागोरस हामीकहाँ नजन्मिउन् । जसको जहाँ जनमत र बलियो आधार छ, उसले नेतृत्व गर्छ ।’
सरकार सञ्चालनमा पनि एमालेले एकलौटी गरेको आरोपमा उनले त्यस्तो केही नभएको बताए। सचिव सरुवा पनि माओवादी नेतृत्वसँग परामर्श गरेरै अघि बढाइएको दाबी उनले गरे। एमाले र माओवादी मिलेकोमा खुसी नभएका शक्तिहरुले यस्तो हल्ला फैलाएको उनको तर्क छ । यसबाट माओवादी नेताहरु सतर्क हुनुपर्ने र एकतामा सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड समेत दिए।
ओलीले थाइल्याण्डमा रअका अधिकारी भेटेपछि पार्टी एकतामा माओवादीलाई पेल्न थालेको र भारत भ्रमणमा ‘ओलीको राष्ट्रवादको भाँडो घोप्टियो’ भन्ने माओवादी नेताहरुको आरोपमा मन्त्री बास्कोटाले थाइल्याण्ड भ्रमण नितान्त उपचारका लागि मात्रै भएको तथा कसैलाई नभेटेको र कसैलाई भेट्दैमा राष्ट्रवादको भाँडो घोप्टिने वा थपिने भन्ने आशंका गलत भएको बताए। यसले एकता प्रक्रियामा अविश्वासको खाडल पैदा गर्ने उनकाो चिन्ता छ।
उनले अगाडि भने, ‘के सत्य हो? के हल्ला त्यो साथीहरुले बुझेर टिप्पणी गर्नुपर्छ। भूपि शेरचनको कविताले भनेजस्तै यो हल्लैहल्लाको देश हो । हल्लाकै आधारमा माओवादी नेताहरुले दृष्टिकोण बनाउनुहुन्छ भने त्यो गलत हो । पार्टी एकीकरणको फैसला कुनै अरुसँग गरिने भेटघाट र बसउठबाट प्रभावित भएर हुने कुरै होइन । उहाँ थाइल्याण्ड जानुभएको नितान्त उपचारको सिलसिलामा हो । यो कुरा निकै पुरानो पनि हो, सरकार नबन्दै हो । हामीले त्योबेला उहाँलाई सोध्दा डाक्टरबाहेक अरु कोही विदेशीसँग भेट भएको थिएन । केही नेपालीसँग भेट भयो भन्नुहुन्थ्यो ।’
स्थायी कमिटीले के भन्यो ?
एकताका लागि पदीय भागवण्डाको रक्साकस्सी दुई पार्टीबीच चलिरहेका बेला सोमबार साँझ अबेरसम्म बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले माओवादी केन्द्र सँगको एकतालाई सकेसम्म यही वैशाख ९ गते नै गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। दुई पार्टीले गठन गरेका संगठन र वैचारिक कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेको र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवस (वैशाख ९) मा एकता गर्न सुझाइएको सन्दर्भमा एमाले स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो।
स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङका अनुसार एकताका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक तयारी पूरा गरेर ढिलो नगरी अधिकतम सहमति गरी एकता घोषणा गर्नुपर्ने नेताहरुको जोड रहेको बताए। प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोमबार दिनभर अन्य कार्यक्रम स्थगन गरी एकता प्रक्रियासम्बन्धी छलफलमा जुटेका थिए। उनले बिहान केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
दुई दलबीचको एकता संयोजन समितिको बैठक मंगलबार राखिएको छ। संयोजन समितिले प्रतिवेदनमा सहमति हुन बाँकी देखिएको एकताको मिति, घोषणा प्रक्रिया, एकतामा सांगठनिक अनुपात, जनयुद्धबारेको विश्लेषणबारेमा निक्र्यौल गर्नुपर्नेछ। नेपालपनाले खबर लेखेकाे छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका प्रमुख एजेन्डा: गंगामा नेपाली पानीजहाज, कोसीमा स्टिमर चलाउने
२०७४, २२ चैत्र बिहीबार ०६:५३
२०७६, १० माघ शुक्रबार १६:००
जिल्ला बुद्धिचाल सङ्घमा पोख्रेल
२०७६, १४ असार शनिबार १५:४३
सडकबाट गुडिरहेको बस खोलामा खस्दा ४ जनाको मृत्यु
२०७८, २ मंसिर बिहीबार २०:३५
रेडक्रस साेसाइटि गाेरखा जिल्ला शाखाले साेसाइटि स्थापनाकाे 56 औ वर्ष मनायाे
२०७५, २१ भाद्र बिहीबार ०१:११
सरकार बिरुद्ध गोरखा सदरमुकाम सहित देशभर बिरोध प्रर्दशन